Ikhaya IZITOLO ZAMAHHALA WE-AMERICAN SOCCER Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Captain America". Indaba yethu yobuKristu yezingane ezincane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungomunye wabadlali bebhola elihle kakhulu e-USA ewake wakhiqiza. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Christian Pulisic's Biography okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isendlalelo sokuqala nokuphila komndeni
Ukuqala, Christian Mate Pulisic wazalwa ngosuku lwe-18th lukaSepthemba 1998 eHershey ePennsylvania, eU.SA. Wazalwa nonina uKelley Pulisic noyise Mark Pulisic. Bobabili abazali banemibhangqwana ethandwayo yezemidlalo edlalwa ibhola lezemidlalo UGeorge Mason University.
U-Pulisic osemusha wakhulela ePennsylvania ejabulela inhlanganisela yothando yabazali bobabili kanye nodadewabo uDeDee kanye nomzalwane oyisinyathelo esingaziwa kancane. I-pulisic yayithanda ukudlala ibhola njengengane, umdlalo owafika ngokwemvelo kuye ngaphandle kokukhulunyelwa ukuba uwuthathe njengomdlalo wezingane. Eqinisweni, ubaba kaPulisi ukhumbula ukuthi ekuqaleni wazama ukuphazamisa indodana yakhe emdlalweni webhola ukuze kuqinisekiswe ukuthi izintshisekelo zezingane emdlalweni zizodwa.
"Sasiyiphonsela eminye imiyalelo ngaphandle kwebhola. Akazange aphoqelelwe nganoma iyiphi indlela. Ngangifuna ukuqinisekisa ukuthi wenza isinqumo. Izinto azisebenzi uma uphoqelela ukuqeqeshwa kwabantwana. "
Amanothi kaMark Pulisic ekuthandweni kwakhe kwebhola.
Uthando lomdlalo webhola lomdlalo webhola ludlulisela phezulu ku-2005 ngenkathi unina wakhe uKelly ehlinzekwa ukuba afunde umsebenzi wokufundela eNgilandi ngonyaka owodwa. Intuthuko yabona uPulisic ejoyina abazali bakhe ngokushiya izwe laseNgilandi lapho eqala ukudlala ibhola lezokuncintisana.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi we-Buildup
Lapho efika eNgilandi, uPulisic nabazali bakhe bahlala eTackley, idolobhana elincane elinokuthula eliqhele ngamakhilomitha ambalwa enyakatho ye-Oxford. Ngesikhathi e-Tackey, uyise ka-Pulisic akachitanga isikhathi sokubhalisa i-6 oneminyaka engu-ubudala ekusungulweni kwentsha yedolobha laseBrackley, okuyi-18.0 miles (30 imizuzu yokuhamba) ukusuka emzaneni.
KwakuseBrackley edolobheni laseBrackley ukuthi uPulisic waqala ukugijima ibhola lokuncintisana ngonyaka, edlala noma nini lapho ithuba liziveza esikoleni, ngaphambi kwesikole, ngemuva kwesikole, neqembu lakhe emidlalweni yendawo, ngezimpelasonto nabazali bakhe kanye amapaki kanye nezindawo zokudlala zokujabulisa abazali bakhe.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Road To Fame
I-trio yabuyela eMelika futhi yahlala eMichigan ngemuva kokuphela kohlelo lokuguqula umama likaPulisic. Kodwa-ke, kwakungekho ukuphela kwesithandwa salo mfana lapho ephuma khona lapho eya khona eNgilandi ngokudlala eMichigan Rush. Wayenenkampani ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokuba umndeni wakhe ubuyele edolobheni lakubo iPennsylvania.
Isikhathi sabekwa isikhathi abazali abangamaPulisi abawenza ngayo umsebenzi webhola lomntanakho ngokubaluleka ngokumbhalisa eqenjini lasekhaya lase-US Soccer Development Academy, i-PA Classics. I-Pulisic yachitha iminyaka eyisikhombisa eqenjini edlala izingane ezazingaphezu kukaye. Eminyakeni ethile kamuva uPulisic ophumelelayo wayeqaphele ukuthi angaphumelela kuphela ku-PA Classics ngokuzikhandla ukuzikholelwa
"Ngesikhathi ngisengumdlali omncane kunabo bonke, ngangingeke ngisebenzise amakhono ami angokwenyama ... bekufanele ngibashaye ngengqondo yami."
Okufanele ukusho, kwakungu-PA Classics ukuthi uPulisic wabeka isisekelo sezimfanelo eziyizici zesitayela sakhe sokudlala.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
I-2014 yayingumnyaka othakazelisayo wePulisic eyayiqhamuka inkanyezi ephazamisayo futhi ibhekwe amaqhawe aseJalimane uBorussia Dortmund. Ukushintsha kwakhe kusukela e-US kuya e-European Country Germany kwakungekho ama-hitches ngenxa yokuthi unobunye bezakhamuzi zase-US naseCroatia (naseYurophu). Lokhu okusho ukuthi izakhamuzi zase-EU zitholwa kalula ngendodana yakhe eyayizalwa ngesiCroatia, uMate, okuvela kuye uPulisic igama lakhe eliphakathi.
Ukumemezela ukuhamba kwakhe e-PA Classics kuya eBorussia Dortmund ingane enethemba eligcwele ukuzethemba njengoba ephawula ukuthi wayilungiselele izwe elisha elinesibindi;
"Ngilungele le nselele entsha. Kuzoba nzima, kodwa ngicabanga ukuthi ngiphakamisile. "
Ngokuvumelana namazwi akhe uPulisic uye wabhala impumelelo emangalisayo kusukela asayinwe kuDortmund ngoFebhuwari 2015 futhi wenza i-debut yakhe eqenjini ngenkathi i-2-0 iwina ne FC Ingolstadt ngo-30th of January 2016.
Sekude kakhulu, uthuthuke phakathi kwezigaba, wahola imigomo futhi ngezikhathi eziningi waba umdlali osemncane kunazo zonke waseMelika ukuze ahlasele futhi abeke amarekhodi. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ukulandela intombazane ephakamisa udumo, umbuzo ngomlomo wonke umuntu ... Ngubani intombi yobuKristu yamaPulisic noma i-wag ?. Akunakuphika iqiniso lokuthi i-American ekhulunywe kahle ephethe isiteleka esicacile esizayo esesitelekeni njengendoda ekhangayo. Kodwa-ke, uPulisic usengashadile futhi ugxile ekwenzeni umsebenzi wakhe ezintweni ezingaqondakali.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
I-pulisi inomndeni owenzela noma yimuphi umzwelo angase awulahle ngokungabi nentombi. sikulethela imininingwane mayelana nomndeni wakhe onothando wezemidlalo.
Mayelana noPulisiki: Ubaba we-Pulisic Mark Pulisic wazalwa ngo-20th ka-Septhemba 1968. wadlala ibhola lezemidlalo eGeorge Mason University phakathi kwe-1986 ne-1989 ukurekhoda imigomo engamashumi amathathu nanhlanu emibukweni ye-73. Uyisikhathi salokhu okuthunyelwe ngumqeqeshi oqeqeshiwe ePittsburgh Riverhounds. UMark wabelane ngesibopho esikhethekile nendodana yakhe aqhubeka efundisa kuze kube yimanje.
Mayelana Nomama Wama-Pulisic: KU-elly Pulisic yilo wesifazane ongazange nje akhulise indodana yakhe ukuba abe umdlali okhethekile kodwa wamfundisa izilinganiso zezifundo ngebhola, umdlalo naye wadlala eGeorge Mason University ku-1980s. Kwakuyunivesithi lapho ehlangana khona waqala ukuhlangana nobaba kaPulisic, uMark.
Mayelana nabantwana bakithi bamaPulisic: I-pulisic inodade onothando obizwa ngeDeeDee. Umdlali uyamthanda inkampani futhi akalokothi ayeke ukumkhumbula lapho engekho ekhaya.
Ngakolunye uhlangothi, unomunye wesifazane ongaziwa kancane ngaphandle kweqiniso lokuthi uhlale ebonakala ezithombeni zomndeni njengalezansi.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuvunyelwa
I-Pulis icishe ibe yi-20 iminyaka kodwa isivele ihambele izinkambiso eziningi zokuvumela okubandakanya inkampani ye-Chocolate kanye ne-cocoa imikhiqizo - i-Hershey, umkhiqizi waseMelika wezitshalo ezithinta ezemidlalo nemikhiqizo yokudla - i-Gatorade, inkampani yokuqoqa ezemidlalo - i-Panini-America ne-Footwear manufacturing company - i-Nike .
Okwamanje, ukuvunyelwa okuningi kulindeleke ukuba kufike ePulisiki njengoba iNyakatho Melika izobamba iqhaza leNdebe Yomhlaba ye-2026 Fifa.
Christian Pulisic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso okuphila komuntu siqu
I-Pulisic isidlali esithambile futhi esithembisayo esingcono kakhulu esisazofika. Yize intsha eqiniseka ukuthi iyimfihlo kakhulu, unabangane abaningana abahlala nabo futhi bahlanganyela ubudlelwane obuhle neqembu lakhe. Uyakuthanda umndeni futhi ngokungangabazeki, abe umngane obalulekile intombi noma umfazi wakhe lapho ekugcineni ehola.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda Indaba yethu yobuKristu yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Usuku olushintshiwe: Ephreli 19, 2019